यी ६ कम्पनीका स्यानिटाइजर बिक्रीमा प्रतिबन्ध - Nepal Daily
यी ६ कम्पनीका स्यानिटाइजर बिक्रीमा प्रतिबन्ध
शुक्रबार, ०५ मंसिर २०७७, ११ : ३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले ६ कम्पनीका स्यानिटाइजरमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागले पछिल्लो समय बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका उत्पादनमा मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने मेथानोल भेटिएपछि बिक्री तथा वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको ५ र १० रुपैयाँका नयाँ नोट आजबाट प्रचलनमा
निरन्तर ओलारो लाग्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
सोमबार कति छ, सुनचाँदीको मूल्य ?
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको?
निरन्तर ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?